Ebee ka eji agba igwe igwe Shinola? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Shinola anyịnya igwe nyocha - nzaghachi na okwu a
Shinola anyịnya igwe nyocha - nzaghachi na okwu a
Ebee ka eji agba igwe igwe Shinola?
A na-echekwa osisi anyị na ndụ anyị na Waterford, Wisconsin site na ụlọ ahịa a ma ama Waterford Precision Cycles, nke zuru okeigwe kwụ otu ebenzukọ na-ewere ọnọdụ na ogbako Detroit anyị.
The Motor City, nke a na-akpọ aha ụlọ ọrụ ụgbọ ala nke bilitere ebe a, Detroit bụ obodo nke anọ kasị ukwuu na mba ahụ ọtụtụ iri afọ mgbe nke ahụ gasịrị, na-ewere usoro nhazi nke mgbakọ na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ na-agbasa site na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba na mberede na mmadụ na-ele anya n'ụzọ dị iche obodo ukwu, mana mgbe njem na-esi ike hart abịa na isi na ya mere na ọ bụ naanị ihe dabara adaba na obodo a maara maka ịme igwe na-alaghachi, naanị oge a bụ injin ndị ahụ dị obere karịa shinola malitere na 2013 nwere ozi iji mee nche, ịnyịnya ígwè na akpụkpọ anụ na n'otu oge ahụ na-eweta ọrụ nrụpụta na Detroit yana ihe karịrị ndị ọrụ 300 nọ na mpaghara ndị na-akụ kwa ụbọchị na ha na-aga nke ọma n'ụzọ bụ gịnị bụ ahahinola pụtara ebe soshinola bụ akpụkpọ ụkwụ ochie na-enwu ọkụ ma bụrụ onye ama ama 50s na o nwere ike chetara anyi na anyi siri na imaghi t nke shinola na ihe ndi ozo dika anyi siri chee ihe anyi ga akpo ika na oge nke iwe? ody kwuru nkebi okwu a ma anyị maara na anyị nwere aha anyị nke mere na nke a bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ee, ebe a bụ ebe nche anyị niile gbakọtara na Olivier ga-egosi gị otu ọrụ dị mfe iji wulite elekere site na ncha bụ akara condom mkpịsị aka wee gaa na ngagharị Ngalaba gịnị kpatara ha ji akpọ ya nke ọma nke na-eme ka elekere na-eme ka nguzo na akwa ahụ wee bụrụ isi ọrụ ya dabere na mmegharị uh-huh yabụ e debere mpempe akwụkwọ mbụ mm- hmm na-edekọ site na oghere ahụ? N'ebe a, ya mere ana m agbanye oh otu a, pịa ya oh, ee nke ahụ bụ ihe siri ike ị ga-etinye anya ma lelee ihe ị na-eme n'ọdụ ụgbọ mmiri na-esote, naanị ị mere ihe m ka nwere 10 ọrụ ọzọ na injin m. dikpọ oku site n'aka na mgbe ahụ ọ na-aga nzukọ na nke bụ ntuziaka aka mwube anyị ga-ahọrọ onye ọ bụla aka na tweezers uh ị ga-eme ka ha ka elekere 12 mbụ awa hour ugbu a ị nwere ike pịa ya ala ma ugbu a ị nwere ike ọ bụghị pịa tweeter wepu ọkara nke abụọ gafere na ihe niile oh ebe ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ọ na-esikarị ike ịkwado ha n'ụzọ zuru oke na-eche na m ga-akwụ ụgwọ nke ọma ee biko sonyere anyị anyị mechie ndị na-arụ ọrụ n'azụ sapphire crystal na ngalaba ahụ oh ebe clip ahụ na-aga na na mgbe a ole na ole ikpeazụ kposara ikesiike ihe niile ị na-ewu dị tinye gị mbụ nche ọnụ M ike ikweta otú ọrụ na nke a ọ obere mma na-arapara ruo mgbe ị na-ahụ na ị maghị na e nwere ọtụtụ akụkụ na onye ọ bụla akụkụ nwere ike ịga, mana w okpu bụ elekere na-enweghị eriri akpụkpọ ahụ iji yikwasị ya, ya na usoro ole usoro a na-ewe, enwere usoro 25 iji mee nke a, yabụ ị na-ekwu maka ndị 25 ruo 32 na-emetụ mmadụ niile aka? otu eriri na ụfọdụ n'ime ndị ọzọ ahụ bụ sirones na-ebugharị gị ọzọ oh oh my god i ga-elekwasị anya ga-efunahụ mkpịsị aka alethea na solder ya mere kedu ka ọkụ si dị ugbu a na n'ụzọ nkịtị na-agbaze na na lonnie na igwe nhicha igwe enweghị ike rụọ ọrụ a Ya mere, ọ bụ n'ezie ndị nọ ebe a na Detroit na-eweta ihe a. Selanne achọpụtara m na ị na-eyi elekere Ashinola ma ị nyere aka mee ka nke a dị mpako na ya, m na-atụ egwu, ma ọ bụrụ na ịchọrọ elekere na ọ bụrụ na ị ' Enwere m eriri akpụkpọ anụ, ọ na-aga na ngalaba a maara dị ka Chappell iji lụọ ya, m ga-anwa itinye ọnụ maka ijide n'aka na m bịara ebe a, akụkụ ahụ na-esokarị akụkụ 12 elekere ahụ ma nke ahụ bụ elekere iri na abụọ - n'akụkụ ee, yabụ akụkụ a na-abanye ụwa mbụ ebe ahụ naanị ka ị kwado ma debe otu ọrụ na-eme ka ọrụ nrọ ahụ nwee ekele ọhụrụ maka ihe niile na site na Shinola, amaara m nnukwu ekele maka ndị Detroiters raara onwe ha nye, ndị nwoke na ndị nwanyị nwere nkà bụ ndị mere ezi American a ahia, ọ na-apụta
Anya Shinola dị elu?
Ihe “ShinolaDetroit-rụrụ ”Argonite 5021 quartz ije, aka gbakọrọ si 85 Switzerland-mere mmiri bụ isi ma mere nke ka mmaogoAkụrụngwa karịa ọtụtụ mmegharị Japan na teknụzụ EOL maka ndụ batrị. Na mkpokọta,Shinolana-eme ezigbo elekere kwa ụbọchị.10.20.2014
ịgba akụkọ ọnwụ ọnwụ
Ndewo ndi ozo ma nabatakwa na ihe ozo nke Federico Tox Watches taa Achọrọ m ikwu banyere ihe a ma ama na ntaneti, hih Dinky kọrọ banyere ya na ọ na-agakwa na Urbangentry facebook group na nke ahụ bụ Switzerland - mere ihe mere anyị ji tozuo bụ emeela na ị makwaara ihe m chere maka mkpebi FTC iji wepụ Shinola, nke e wuru na Detroit ogologo oge tupu anyị amalite, anyị ga-eme nkwojiaka aka na-asacha Chuck taa, m na-eyi pre -Ceramic sub on a binding nke ahụ bụ NATO zuru oke maka ihu igwe na-ekpo ọkụ anyị nwere ebe a na New York na mpempe a bụ n'ezie ihe ruru eru maka swiss-mademoniker, yabụ na ịmara tupu agbapụ nke a, m googled isiokwu ntakịrị na ihe ndị chọrọ Switzerland mere na wuru na Detroit ma ọ bụ mere na America bụ n'ezie ndị dị iche iche, yabụ gịnị kpatara na anyị anaghị ebido Switzerland mere. Nke mbụ, 60% nke uru nke Switzerlandwatch gị ga-abụ akụkụ Switzerland, akụkụ nke ọzọ 40% nwere ike ịbịa site na ebe ọ bụla ma n'eziokwu, ọ bụ ya mere ọtụtụ ụlọ ọrụ ji ekwu na ha bụ ndị nrụpụta zuru ezu ma ọ bụ kpamkpam n'ime ụlọ. Nke a na-apụtakarị na ọ bụ otu narị na Switzerland.
Ọ ga - eju gị anya ole akụkụ elele maka ụdị okomoko Switzerland ndị a sitere na China, ugbu a nnukwu ihe ndị na - ewetarakarị bụ kristal Ọtụtụ kristalSristal kristal na - esite na China N'ezie, enwere ndị na-emepụta sapphire kristal ole na ole n'ebe ọ bụla ọzọ. na ejikari A na-ebubata okwu ndị ahụ Ọ bụghị ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ikpe nke aka ha, m na-ekwu na ụdị ndị dị elu na-eme ọtụtụ n'ime ha na Hong Kong na akụkụ nke atọ nke a na-ebubatakarị bụ eriri eriri eriri Ọtụtụ eriri eriri agụ sitere na eriri eriri ebe a na USA na Louisiana na ọtụtụ n'ime ha na-aka-sewn ma na America na Germany ma ọ bụ na France na N'ezie na-na China. Iji ruo eru maka Switzerland Mere, 60% nke ngụkọta uru nke elekere gị ga-abụ Switzerland Par kwekọrọ na ugbu a enwere ụfọdụ ụdị, bụrụ ndị nọ nso otu narị ehi, ka anyị kwuo ka anyị kwuo 99% na nke ahụ bụ Rolex 99% Switzerland Patek Piaget ị maara n'ezie na Seiko bụ onye na-ebu ntutu ntutu isi na ụlọ ọrụ nche Seiko You maara na ọtụtụ n'ime Switzerlandwatches gị nwere Seiko? Hair Springs, ma n'ezie ọ ka ruru eru maka aha aha Switzerlandmaid, dị ka 60% nke uru a na-eme ugbu a na America, nke FTC ma ọ bụ American Federal TradeCommission na-ewere dị ka ihe emere na America ma enweghị ike ịgbakọta kpamkpam na America nke a na - eme ma enweghị m ike ịchọta pasent ziri ezi nke mere na akara elekere dịka Shinola nwere okwu abụọ na FTC na - achịkwa iwu na nke wuru na Detroit na ebe ndị Amerịka mere ugbu a na - eduhie ma anaghị m ekwu nashinola mere na nzube m ga-ahapụ unu ka unu rụọ ụka na ihe ọ bụla ịchọrọ ma akụkụ ha si China na Switzerland wee zukọta duru na Detroit, nke na-erughị eru dịka onye nrụpụta na America, yabụ anaghị anabata ya na elekere anya ebipụta N'ezie, ọ bụrụ n'ilee anya n'ihe edeturu m ebe a, ha ga-agbakwunye nkwupụta ụta ya na akụkụ Switzerland ndị a na-ebubata n'ihi na ọ bụghị kpamkpam America ka nke ahụ dị ntakịrị n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka m chee na e wuru Shinola na America n'ihi mpako ya Ihe niile choro itinye ego na m nwere ike ihu ebe ha mara ebe nke a na-abia mana dika FTC o si ezighi ezi ma na-eduhie ndi China ka ha gbanwee okwu ha abuo ma ghagharia ngwa ahia na akpa iji kwuo ma obu Detroit wuru ma obu iru eru Iji tinye nkwupụta na m ka kpọtụrụ aha na Switzerland mbubata akụkụ Isay Bravo Echere m na e nwere ezuru aghụghọ na-eche nche ụlọ ọrụ dị ka ọ dị, ị maara ụbọchị ndị a ị maghị n'ezie ihe na-eme, m na-ekwu ụfọdụ n'ime ndị ị maara, m too ụfọdụ ndị na-emepụta obere, ma ọ bụrụ na ị na-ele anya na mgbatị ahụ, ha na-ekwu Switzerland MVT nke na-apụtakarị njem Switzerland nke ị maara na ọ bụghị otu, nke ahụ pụtara na Schweizer mere ya na ahụ ya bụ m ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu nghọta, ọkachasị na ụlọ ọrụ a, mgbe ngwaahịa na-efu nke ukwuu ma ị chere na ị na-echefu ugwu a nke swiss mere ormanufacturing na America nke na-abụghị eziokwu ugbu a ọtụtụ ozi a nwere ike ịbụ n'ezie achọtara na heideki m na-ahapụ njikọ na isiokwu dị n'okpuru ma ọ bụ na dinky gị nwere ezigbo mkparịta ụka na FTC gbasara obere kukumba Shinola n'aka anyị na ị maara nke ọma na ị maara na FTC kwubiri na Shinola naanị na-akwụ ụgwọ na US mere aha otutu , kedu ihe ị chere hapụ m okwu na ngalaba dị n'okpuru ebe a ma achọrọ m ka ụmụnwoke mara anyị? Eruola ndị debanyere aha 5,000, nke ahụ dị mma, ana m ekele gị nke ukwuu na echefubeghị m ọnọdụ ekwere na nkwa nke nchịkọta n nke nwere ike ịpụta na Wednesde, Wenezdee ma ọ bụ Fraịdee A ga-ebipụta steeti nchịkọta ahụ ma echefukwala idebe na ịpị bọtịnụ ịdenye aha m Ọ juru m anya na anyị etolitela ngwa ngwa, ihe m na-ekwu bụ na anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị debanyere aha 50 100 na ọ bụ ihe na-erughị ọnwa atọ ndị maara, yabụ ọtụtụ ndị nwere mmasị ịhụ m n'ihu igwefoto ma ka na-ekwu okwu banyere ese, na-ekele gị nke ukwuu na ị nọrọ maka ọzọ federicotox nche usoro na m ga-ejide gị na nke na-esote, lezie
Anya Shinola nwere uru ha bara?
NaShinolanche na-anapụta nnukwuurun'ọtụtụ ụzọ. Agbanyeghị na otu bracket dị ka Rolex maka ebumnuche itinye ego, ọna-ejide yanwere maka ọchịchọ.Yaikiri oke vintage, akụkọ akụkọ America niile, nayaike ịmepụta nnukwu mgbasa ozi ahịa ga-ahụuru ọ barana-adịgide n'ọdịnihu.
Gịnị kpatara Shinola ji dị oke ọnụ?
Shinolanche na-efu ihe karịrị elekere elekere Eshia n'ihi na ha gbakọtara na USA ma na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ karịa ụgwọ kacha nta, yana uru (ShinolaUru ndị ọrụ 2013).
Gịnị na-eme ụmụ okorobịa! Aha m bụ brock see hụrụ Nwoke Dị Umeala. Taa, anyị na-ekwu maka ọdịiche dị n'etiti quartz, igwe na igwe elekere. Ọ dị mma, ọtụtụ ndị nwoke na-azụta elekere etu nwa na-eto eto ga-esi azụ ụgbọ ala mbụ ha.
Ha dabere na aesthetics. Know maara na ọ dị ka ọ dị jụụ? “Dodị ya na-amasị m ka ọ bụ na akara a masịrị m? Ọ na-adị m ka ọ na-anọchite anya m? Ọbụna m na-eche ndị na-azụta elekere dị elu dịka Rolex na-azụkarị naanị maka akara aka nke akara ahụ. Know mara, n'ihi na ọ bụ a na na ụdị elu-ọgwụgwụ ugwu ika.
Don't na-bụchaghị ịzụta ha maka ihe ma ọ bụ rụọ ma ọ bụ ije. Ma ọ nweghị ihe ọ bụla dị njọ na nke ahụ. Onweghị ihe dị njọ n'ịzụrụ elekere naanị n'ihi na ị masịrị ụzọ ọ dị, ma ọ bụ ọbụlagodi n'ihi na ọ dị mma, ma ọ bụ kwekọọ n'ụdị gị, ma ọ bụ ihe ọ bụla, mana ịnwa ịnweta mpempe ihe nketa ị ga-enyefe ụmụ gị ị maara na ọ bara uru ileba anya na elekere ma choputa ihe n’eme ya.
Dị ka ụgbọ ala nwere moto na-eme ka ha rụọ ọrụ, elekere nwere omume a na-akpọ elekere anya nke na-eme ha ka ọ daa. Ugbu a, e nwere elekere nwere ụdị ọrụ elekere atọ dị iche iche. Have nwere quartz nke na-arụ ọrụ batrị, igwe, na akpaka.
esi egwu igwe kwụ otu ebe
Ka anyị kwuo banyere mmegharị quartz. Quartz ghọrọ ihe ama ama mgbe Seiko webatara ya na 1959. N'ezie, ọ fọrọ nke nta ka ha gbuo ụlọ ọrụ igwe elekere na akpaka n'ihi na ha dị ọnụ ala ma dịkwa oke mma ma dịkwa mfe ịmịpụta ngwaahịa.
Know maara oge ezumike quartz, ikekwe ị gaghị akwụ ụgwọ iji mezie ha, ikekwe ị ga-anọchi ha. Ma n'ezie naanị mmezi ị chọrọ bụ na ị ga-agbanwe batrị kwa afọ abụọ ọ bụla ma ọ bụ ise ọ bụla ma ọ bụ ọbụlagodi 10. ga-eji dochie afọ ma ọ bụrụ na batrị enweghị ihe ọ bụla.
Anya quartz dị oke mma. Ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ziri ezi karịa igwe elekere ma ọ bụ akpaka. Mana ka anyi chee ya ihu, otutu n’ime anyi adighi eyi nche n’ihi na anyi kwesiri ima oge.
Anyị nwere oge na ekwentị anyị na akpa anyị. Anyị na-eyi ese dị ka ngwa. Dị ka otu ọla.
Ma mgbe elekere quartz nwere onu ma nwekwa ezi na nlele anya, obughi ezigbo ihe mmebi nke otutu ndi mmadu. Ihe kpatara ọtụtụ mmadụ ji azụta elekere quartz, na ihe kpatara ọtụtụ ụdị ji eji mmegharị quartz, bụ n'ihi na ha dị ọnụ ala. Ya mere Ohere inweta bụ mgbe ị na-ahụ ọnụ ala ese.
Ohere bụ na ha na-eji quartz ma ọ bụ batrị kwadoro ije. Ugbu a ndị na-anakọta ihe na-enwe ekele maka nka na ọrụ aka na ịchekwa ihe na-akpata oge ha ga-elegharị anya na mmegharị elekere na akpaka. Ka anyị kwuo maka mmegharị elekere igwe.
Yabụ kedu elekere igwe bụ elekere aka nke nwere ọtụtụ narị ma ọ bụ puku kwuru puku iji obere akụkụ akụkụ iji mee ka nche na-eche mgbe ọ na-adị ọhịa, ụlọ ọrụ Switzerland nwere mmegharị ikike nwere ike ree ha ọtụtụ narị puku ma ọ bụ ọbụna nde kwuru nde. N'ihi ụlọ ọrụ na-agagharị agagharị dịka ETA, bụ nke ọtụtụ mmadụ na-emepụta mmegharị igwe maka ọtụtụ ndị na-ekiri ihe nkiri, obere ụdị boutique nwere ike iji igwe eji arụ ọrụ nke ọma na-asọpụrụ elekere anya okomoko ndị ama ama na Switzerland, Germany, na Japan. Ya mere, ihe na-eme bụ na ị nwere ọtụtụ okomoko ụdị na-n'ezie elu ọgwụgwụ na otu n'ezie Nkea dị ka obere. nke tọrọ, ọnụ ala, ma ọ bụ ụdị ụlọ ahịa.
Ugbu a, uru kasịnụ nke igwe elekere anya na elekere quartz bụ na ị na-elekọta ya ma jide ọnya. Igwe igwe ga - adịru ogologo oge, ị maara, ọgbọ niile. Anya Quartz ga-adị ogologo oge, mana ọ ga-anwụrịrị.
Know maara kpọmkwem otu kọmputa gị ga-esi daa. Elekere igwe, n’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ dị ọcha ma bido nke ọma, ị nwere ike nyefere ya ụmụ gị, ha nwere ike inyefe ya ụmụ ha, were gabazie. Maka otu ihe ahụ, igwe elekere na-adịkarị mkpa ịrụzi ebe elekere quartz na-atụfu ya ma dochie ya.
Ọ dị mma, nzọụkwụ ọzọ site na ndị ọrụ igwe, mmegharị akpaka. Ndị a bụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, klas mbụ. Ndị a bụ crème de la crème mgbe a bịara n'ịchịkọta mkpokọta.
Nnukwu ihe dị iche na nche elekere na igwe elekere na elele na-arụ ọrụ na-aga n'ihu na-akọrọ ọbụlagodi na ị naghị eji aka ha. Yabụ ọ bụrụhaala na ị na-eyi ya na nkwojiaka gị, mmegharị nke ogwe aka gị na-egbochi ọnya nche. Ọ na - eme nke a site na iji rotor na - anọghị n’etiti na - atụgharị uche ka ị na - agagharị n’ụbọchị ọ bụla ma dịka ọ na - atụgharị ya ọ na - eme ka usoro ratchet rụọ ọrụ nke na - eme ka ọnya nche ghara ịdị.
Ugbu a, ọ bụrụ na anyị elele anya akpaka nche n'ozuzu na elekere igwe n'izugbe, elekere akpaka adịghịzi ezi karịa elele igwe, ezigbo uru bụ na ha na-akọrọ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị ikuku. Nchekwa akpaaka ugbu a nwere ikike nchekwa akpọrọ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ọnya zuru oke ọ ga - anọgide na - akọrọ oge ụfọdụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị hụ elekere akpaka nke na - ekwu na o nwere ikike awa 48, ọ pụtara na ọ bụrụ na ọnya zuru oke ma wepụ ya, ọ ka na - agbanye 48 awa mgbe e mesịrị. Ugbu a ogologo ike idobere dị iche n'etiti ụdị dị iche iche na ụdị dị iche iche, mana ọ dị mma iche na ọtụtụ elekere akpaka ma ọ bụrụ na ị wepụ ha n'abalị, tinye ya na tebụl akwa gị, n'ụtụtụ ọ ka na-akụ. N'ezie, ọ bụrụ na ọ kwụsị ịkọ akara ọ pụtara na ị ga-edozigharị ya oge ọzọ ị ga-eyi ya.
Ọ dị mma ka ị nweta oge na ụbọchị ziri ezi. Ọ bụrụ na ọ nwere windo ụbọchị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikuku ya, ọ bụrụ na ọ nwere usoro ikuku aka, ma ọ bụ ị megharị ya n'ụzọ ọ bụla iji mee ka ọ gaa, mgbe ahụ, mgbe ị tinyere ya, ọ na-amalite ịgbanye onwe ya niile withbọchị na ijide mmegharị nke ogwe aka gị. Ọ bụrụ na ịnweghị obi ụtọ ịnyagharị ma tọgharịa elekere gị, ịnwekwara ike itinye nche elekere gị na winder nche, nke dị ka obere ngwaọrụ nchekwa nke na-eji nwayọ na-agbagharị elekere ahụ ka ọ na-agbanwegharịrị gị ọbụlagodi mgbe ịnọghị yi ya.
Ugbu a ị mara na elele akpaaka bụ elu nke nso ahụ ma ha nwere ike ịnweta oke oke, dị oke ọnụ dabere na ebe emere ya yana ọtụtụ nsogbu ọ nwere dịka windo ụbọchị ma ọ bụ mita nchekwa ike ma ọ bụ ihe ọ bụla gafere oge elekere, nkeji na Aka abuo puta. Ugbu a ụlọ ọrụ na-ekiri ndị na-eme ngagharị nke onwe ha ma na-echekwa nche ha na-adị oke oke ọnụ, ụdị ndị ahụ dị ka ETA nke na-eme mmegharị elekere na akpaka na-ekiri ụdị ndị na-ekiri ụdị nwere ike ịzụta iji ha na nche ha. ETA nwere ike bụrụ otu n'ime ndị ama ama ama ama ama ama ama ama.
Ha bụ ụlọ ọrụ Switzerland ma a na-akwanyere nchegharị anya ha anya. E nwere ọtụtụ ọmarịcha nlele dị oke mma dị oke ọnụ na-eji mmegharị ETA iji mee ka oge ha dị ike. Ma enwerekwa elekere dị ọnụ ala karịa nke na-eji mmegharị ETA.
Dị ka ihe atụ ndị a Linjer akpaka ese. Are na-eji ETA 28 24 - 2 eme ihe, njem Switzerland na-ewu ewu ma na-akwanyere ùgwù. Nke a bụ ebe arụ ọrụ.
ube oyibo uru
Ejiri ya n’ọtụtụ elekere dị iche iche. Ọ dị na àgwà anọ dị iche iche. Ma ọbụna klaasị ọkọlọtọ bụ ezigbo akpaka mmegharị na 25 ọla.
A na-ejegharị mmegharị a na nlele nke na-efu site na puku dollar ole na ole ruo ụzọ iri isii na ise, puku dollar iri asaa. Ma, a na-ejikwa ya na nche dị ka elekere akpaka elekere na-efu naanị narị ole na ole. Ha maara ntakịrị ihe karịa elekere quartz ntinye gị.
Ma ọ bụrụ na ị na-eche ihe kpatara ọnụahịa elekere na otu otu ije ji dịgasị iche. Nke ahụ bụ n'ihi na ị na-akwụ ụgwọ iji mara aha akara ma ọ bụ ihe okomoko. Chee echiche banyere ya: ọ bụrụ na ịnwere otu igwe ahụ dị na Kia na Ferrari, ụgbọ ala ndị ahụ ga-enwe otu injin ahụ, n'agbanyeghị na otu ji okpukpu iri karịa nke ọzọ.
Naanị ihe dị iche na ha bụ akara na ọdịdị ha na ihe ndị ọzọ e wuru gburugburu injin ahụ. N'okpuru mkpuchi ha bụ otu. Yabụ enwere ụdị ndị a na - eto eto ndị na - enweghị ihe nketa mana ha na-asọmpi na ọnụahịa na nnukwu ụdị okomoko.
Echere m na Linjer na-arụ nnukwu ọrụ na nke a n'ihi na n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ na-ewu ewu na-eche nche na-eji nkwanye ugwu Switzerland akpaaka na nche ha, yana ihe ndị ọzọ dị elu dị ka sapphire crystal na ị maara ọka zuru oke na ihe ndị yiri ya. Echere m na ịchọta ụdị ndị a tọrọ nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji merie onwe gị. Mara elekere igwe mara mma ma ọ bụ elekere akpaka yana mmegharị Swiaa na ihe dị mma.
Nhọrọ ọzọ bụ ịchọta ụdị okomoko mana zụta ndị na-agụ vaịn. Zụrụ aka nke abụọ. Yabụ na ị gaghị akwụ ụgwọ zuru oke maka akara ọhụụ ọhụrụ.
Ọzọkwa, ikwughachi, ọ dịghị ihe dị njọ na quartz ma ọ bụ nche batrị, elele igwe na elele anya na-adịkwa jụụ, mana n'eziokwu, ihe kachasị mkpa bụ na ị masịrị elekere ịzụrụ na ị na-eme ya n'ezie. Ya mere ekwela ka nche aficionados ị mara na ọ na-ewute gị na ị na-eyi quartz watch ma ọ bụ zụta ihe a na-akpọ ejiji ejiji. Naanị ịzụta elekere ị chọrọ; n'ihi na ihe ọ bara uru, Abụ m nnukwu ofufe nke akpaka ese.
O nwere ihe gbasara omenkà na-abanye n’ime ya. Naanị m hụrụ ha n'anya, enwere m elekere elekere batrị na nchịkọta m, ọ dị m mma na isiokwu a ga - enyere gị aka ịhọrọ n'etiti quartz, igwe na akpaka, ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla biko hapụ ha n'okpuru ma nọrọ ruo mgbe nkecha oge ọzọ. .
Shinola ọ bụ ezigbo akara?
Maka ndị na-achọ ese mara mma ma sie ike,Shinolaemezuwo n'aha ya. NaShinola ikaadọtakwawo otuto maka ahịa ya, mana ma e jiri ya tụnyere yaụdịdị ka Fosil, emesia ejirila ọtụtụ okwu kwuo na ogo dị naShinolamana na onu ahia di ala.
Shinola ruru ego ahụ?
NaShinolanche na-enye nnukwu uru n'ọtụtụ ụzọ. Agbanyeghị na otu bracket dị ka Rolex maka ebumnuche itinye ego,yana-ejide onwe ya n'ihe gbasara ọchịchọ. Ihe okike magburu onwe ya, akụkọ azụ America niile, yana ike ịmepụta nnukwu mkpọsa ahịa ga-eme ka ọ baara ya uru n'ọdịnihu.
Shinola bụ elekere okomoko?
Na ọnụahịa na-amalite ihe ruru narị dollar ole na ole, ma na-ebute ihe dịka $ 1,500,Shinolanche dịtụ ọnụ; Otú ọ dị, ire ahịa dị na ha dị nnọọ ka onyinye sitere na ejijincheika karịa kwesịrị ekwesịokomokotimepiece emeputa.Ọgọst 14 2018
Anya Shinola nwere uru?
NaShinolanche na-anapụta nnukwuurun'ọtụtụ ụzọ. Agbanyeghị na otu bracket dị ka Rolex maka ebumnuche itinye ego, ọna-ejidenke ya n'ihe banyere achọsi ike. Ọkacha mma ya, ụdị akụkọ azụ America niile, yana ike ịmepụta nnukwu mkpọsa ngwa ahịa ga-eme ka ọ sie ikeuruna-adịgide n'ọdịnihu.
Ego ole ka Shinola Runwell obodo na-akwụ ụgwọ?
Shinola Runwell City Bike Nyocha. Oge Mag na-elegharị anya Shinola Runwell igwe kwụ otu ebe. Ahịa $ 2950 USD. Choo na shinola.com. E Nwere ya na ụlọ ahịa US na ịntanetị. The Runwell, nke sitere na 1940s Parisian Courier anyịnya igwe, bụ ezigbo igwe kwụ ọtọ.
Kedu ụdị elekere Shinola na-ekiri?
Shinola n'onwe na -emepụta elekere, ịnyịnya ígwè, akpụkpọ anụ, na ngwaahịa ndị ọzọ. Shinola na-ewepụta naanị elekere Quartz na elekere eletriki na nke akpaka dị iche na mmegharị igwe na ntụgharị onwe ya, nke ama ama n'ụbọchị ahụ ma e jiri ya tụnyere ndị na-ekiri Switzerland.
Onye nwe akara Shinola?
Ntọala na 2011, Shinola bụ ụdị ndụ na-ere ahịa na ngwaahịa na okomoko. Tom Kartsotis, onye guzobere otu ego a na-akpọ Bedrock Manufacturing Co. nwere ụlọ ọrụ Shinola ma na-arụ ọrụ ugbu a.